टन्सिलको समस्याले हैरान हुनुभएको छ ? सधैंको लागि छुटकारा पाउन अपनाउनुहोस् यी उपाय – Online Khabar 24
घाँटीको माथिल्लो भाग र मुखको पछाडिपट्टी छेउमा रहेका दुईवटा ग्रन्थीलाई टन्सिल भनिन्छ ।
यो प्राकृतिक रुपमा बनेको एउटा ग्रन्थी वा डल्लो हो । यी डल्लो वा ग्रन्थीले हाम्रो शरीरमा पिल्लरको काम गर्छ । हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश गर्ने किटाणुसँग लड्ने रोग प्रतिरोधक क्षमता नै यी ग्रन्थीमा हुन्छ । टन्सिल बच्चा बेलामा खासै विकास भएको हुँदैन ।
६ वर्षसम्म टन्सिल बढ्छ र त्यसपछि विस्तारै घट्छ । यी दुई ग्रन्थीहरुले शरीरको रोगप्रतिरोधक क्षमता बढाउँछ तर कहिलेकाँही आफै संक्रमण हुन्छ । यस्तो अवस्थामा घाँटी फुलेर रातो हुन्छ ।
मौसम परिवर्तनका समयमा हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुँदा बढी सताउने गर्छ । टन्सिल ब्याक्टेरियाले गर्दा हो कि भाइरसले भन्ने छुट्टयाउनु पर्छ । यदि भाइरसका कारणले हो भने घाँटी दुख्ने, ज्वरो आउने र रुघाखोकी लाग्ने हुन्छ ।
त्यसलाई कम गर्न चिकित्सकको सल्लाह अनुसार एन्टिबायोटिक खाएको ४ देखि ५ दिनमा निको हुन्छ। तर व्याक्टेरियाको संक्रमणले गर्दा घाँटी दुख्ने ग्रन्थी बढ्ने, ज्वरो आउने, पाक्ने तथा पिप जम्ने र शरीर दुख्ने तथा गिर्खा आउने जस्ता समस्या हुन्छ ।
व्याक्टेरियाले टन्सिल सुनिने वा गिर्खा बढ्ने हुन्छ । यस्तो समस्या आएमा चिकित्सकको सल्लाह बमोजिममात्र एन्टिबायोटिक सेवन गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन रोगका बिरामीलाई पनि टन्सिल बढ्ने समस्या हुन्छ । टन्सिल भयो भनेर डक्डरकोमा हतारिएर जानु पर्छ भन्ने छैन ।
पहिले घरमा उपलब्ध सामग्री प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ किनकि घरकै सामग्रीले पनि निको हुन्छ टन्सिल । यदी वर्षमा एकपट टन्सिल हुन्छ भने त यो सामान्य सामस्या हो तर यसभन्दा धेरै भएमा यो खतरनाक हुन्छ । यदी टन्सिल भएको खण्डमा एन्टी बायोटिक लिनुको सट्टा केही घरेलु उपचार गर्न सक्नु हुन्छ ।
बेसार पानी खाने: बेसारले भित्री संक्रमणबाट बचाउन प्रभावकारी काम गर्छ । यो प्राकृतिक एन्टिबायोटिक्स नै हो । बेसार शुद्ध चाहि हुनुपर्छ । शुद्ध किन भनिएको भने, अहिले बजारमा पाइने बेसारमा अनेक मिश्रण हुन्छ । त्यसैले गाउँघरको बेसार प्रयोग गरौं । बेसारलाई तातो पानीमा घोल्ने र त्यसले कुल्ला गर्ने वा खाने गरौं । यसले प्रभावकारी काम गर्छ ।
तुलसी चपाउने : तुलसी बहुगुणी वनस्पती हो । टन्सिल भएको अवस्थामा तुलसी चपाउनुपर्छ, राहत मिल्छ । साथै यसलाई पानीमा उमालेर पनि पिउन सकिन्छ । पानी पिइसकेपछि बाँकी रहेको पात पनि चपाउनुपर्छ।
हर्बल चिया : हर्बल चिया पिउँदा पनि टन्सिलको समस्याबाट छिट्टै छुट्कारा पाउन सकिन्छ । टन्सिलका कारण टन्सिलाइटिसको संक्रमण हुन्छ र हर्बल चियाले यसमा जमेको ब्याक्टेरिया र किटाणु बिस्तारै बिस्तारै मारिदिन्छ। यसले गर्दा घाँटी सुन्नि कम हुन्छ र दुखाई पनि ठिक हुन्छ ।
हर्बल चिया बनाउनका लागि ग्रीन टीमा ल्वाङ, अलैंची र दालचीनी मिलाएर पिउन सकिन्छ । यसका साथै अदूवा र महयुक्त चिया पनि टन्सिलको उपचारमा प्रभावकारी हुन सक्छ।
Prevभारतीय प्रख्यात गायक मिका सिंहले पहिलो पटक गाए नेपाली गीत (भिडियो हेर्नुस्)
nextअसोज २९ गते दशैँको दिन तपाईको भाग्य कस्तो छ ? एकपटक अवश्य हेर्नुहोस